အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုးအကြောင်း သိမှတ်ဖွယ်ရာ – Healthy Life Journal
—၊ ပါမောက္ခဦးခင်မောင်ဝင်း (အသည်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—
Q. အသည်းရောင်အသားဝါဘီပိုးရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေရှိပါသလဲ ဆရာ။
A. ဘီပိုးရှိပြီ၊ ရောဂါလက္ခဏာပေါ်ပြီဆိုရင် Too late နောက်ကျသွားပြီ။ ၆ လ-တစ်နှစ်ပဲ နေရတော့မယ်။ ဘီပိုးရှိသူက ဘာရောဂါလက္ခဏာမှ မပြဘဲ ၁၅ နှစ်-နှစ် ၂၀ လောက် နေနေတာ၊ အဲဒီအချိန်မှာ ကုရမှာပါ။ ခြေထောက်ရောင်ပြီ၊ မျက်လုံးဝါပြီ၊ အသည်းထဲမှာ ၆ စင်တီမီတာ အကျိတ်ကြီးပေါ်ပြီဆိုရင် နောက်ကျသွားပြီ။ အဲဒီလိုနောက်မကျခင် ဘာရောဂါလက္ခဏာမှ မပေါ်ခင်မှာ ကုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဘီပိုးရှိသူတွေက ကိုယ့်မှာ ဘာရောဂါလက္ခဏာမှ မပြတော့ ဒီလိုပဲ သွားလာလှုပ်ရှားပြီး နေနေကြတာ. . အဲဒီလိုနေတဲ့အတွက် မနှစ်က ကမ္ဘာ့အသည်းရောင်အသားဝါနေ့ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်က “Find the missing million” လူထုထဲမှာ ပျောက်ကွယ်တိမ်မြုပ်နေတဲ့ ရောဂါသည်တွေကို ရှာထုတ်လိုက်စမ်းပါ၊ သွေးတွေစစ်လိုက်စမ်းပါလို့ ပြောတာပါ။
“နောက်မကျခင် ဘာရောဂါလက္ခဏာမှ မပေါ်ခင်မှာ ကုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဘီပိုးရှိသူတွေက ကိုယ့်မှာ ဘာရောဂါလက္ခဏာမှမပြတော့ ဒီလိုပဲ သွားလာလှုပ်ရှားပြီး နေနေကြတာ. .အဲဒီလိုနေတဲ့အတွက် မနှစ်က ကမ္ဘာ့အသည်းရောင်အသားဝါနေ့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်က “Find the missing million” လူထုထဲမှာ ပျောက်ကွယ်တိမ်မြုပ်နေတဲ့ ရောဂါသည်တွေကို ရှာထုတ်လိုက်စမ်းပါ၊ သွေးတွေစစ်လိုက်စမ်းပါလို့ ပြောတာပါ” . . .
Q. ဘီပိုးကာကွယ်ဆေးကို ဘယ်အရွယ်ကစပြီး ထိုးလို့ရပါသလဲ ဆရာ။
A. အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုးကာကွယ်ဆေးကို မွေးပြီး ၂၄ နာရီကတည်းက စထိုးရတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘီပိုးကာကွယ်ဆေးကို မွေးပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းထိုးဖို့က ရာနှုန်းပြည့်မအောင်မြင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ မွေးပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းထိုးမှ မိခင်ကနေ ကလေးကို ဘီပိုးမကူးမှာလေ။ မွေးပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းထိုး၊ တစ်လပြည့်တော့ တစ်ခါထိုး၊ ကလေးအသက် ၃ လပြည့်တော့တစ်ခါထိုး. .အဲဒီလို ထိုးရမှာ။ မွေးမွေးချင်း အမြန်ဆုံးထိုးပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
Q. ဘီပိုးရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေက ဘာတွေရှိပါသလဲ ဆရာ။
A. အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုးက တဖြည်းဖြည်း ကိုယ့်အသည်းကို လှိုက်စားနေတာ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အသည်းခြောက်မယ်၊ အသည်းမှာ ဗြုက်ထဖြစ်မယ်၊ တစ်ချိန်ချိန်ကျတော့ ဗြုက်က ကင်ဆာထဖြစ်မယ်။ အဓိက အသည်းခြောက်/ အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘီပိုးရှိရင် စောစောစီးစီး ကုသမှုခံယူကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။